Ch 6 Matthew – 2hove
musha / Bhaibheri / Evhangeri yaMateu / Ch 6 Matthew
6:1 "Teerera, urege kuita zvakarurama pamberi pevanhu, kuti muonekwe navo; kana mukadaro hamuzowani mubayiro kuna Baba venyu, vari kudenga.
6:2 saka, paunopa varombo zvipo, usaridza bhosvo + pamberi pako, sezvinoita vanyepedzeri mumasinagoge uye mumaguta, saka kuti kukudzwa nevanhu. Amen ndinoti kwamuri, vatowana mubayiro wavo.
6:3 Asi kana iwe mupe varombo zvipo, ngarurege ruoko rwako rworuboshwe ruzive zviri kuitwa norudyi rwako kuita,
6:4 kuti almsgiving kwako kuve pakavanda, uye Baba vako, vanoona pakavanda, acharipira iwe.
6:5 Uye pamunonyengetera, haufaniri kuva savanyengeri, vanoda vakamira mumasinagogi uye panguva nepamharadzano dzenzira dzemumaguta kuti vanyengetere, kuti vaonekwe nevanhu. Amen ndinoti kwamuri, vatowana mubayiro wavo.
6:6 Asi iwe, paunonyengetera, pinda muimba yako, ugovhara mukova, nyengetera kuna Baba vako vari pakavanda, uye Baba vako, vanoona pakavanda, acharipira iwe.
6:7 Uye kana muchinyengetera, regai sarudza mashoko mazhinji, sezvinoita vahedheni. Nekuti ivo vanofunga kuti avo nekumwisa mashoko arovererwe akateerera.
6:8 saka, usaridza kuvatevedzera. Nokuti Baba venyu vanoziva kuti zvaunoda zvingave, kunyange usati kumubvunza.
6:9 saka, munofanira kunyengetera seizvi: Baba vedu, vari kudenga: Dai zita renyu ngariitwe dzvene.
6:10 Dai umambo hwenyu ngahuuye. Dai kwenyu ngakuitwe, sezvakunoitwa kudenga, saizvozvowo panyika.
6:11 Tipei nhasi redu chingwa youpenyu.
6:12 Uye mutikangamwire zvikwereti zvedu, sezvo isu tinokanganwirawo zvedu mhosva nesu.
6:13 Musatipinza mumuedzo. Asi kutisunungura zvakaipa. Amen.
6:14 Nokuti kana iwe uchava zvivi zvavo varume, Baba venyu vari kudenga vachakukangamwiraiwo kudarika kwenyu.
6:15 Asi kana musingadi kuregerera vanhu, Baba venyuwo havangakangamwiri zvivi zvako iwe.
6:16 Uye kana uchitsanya, usaridza kuva ndambosuruvara, sezvinoita vanyengeri. Nokuti kuchinja zviso zvavo, kuti nokutsanya kwavo kungava pachena nevanhu. Amen ndinoti kwamuri, kuti vatowana mubayiro wavo.
6:17 Asi kana murimwi, kana uchitsanya, zodza musoro wako, ugeze chiso chako,
6:18 saka kuti wako kutsanya havazokwanisi pachena kuvanhu, asi kuna Baba vako, vari pakavanda. Uye Baba vako, vanoona pakavanda, acharipira iwe.
6:19 Musatora zviunganidzirei pfuma panyika: apo nengura uye chitemamachira zvinodya, uye pane mbavha dzinopaza dzichiba.
6:20 pachinzvimbo, zviunganidzirei pfuma kudenga: kusina ngura uyewo chitemamachira, uye uko mbavha dzisingapazi dzoba.
6:21 Nokuti pane pfuma yako, ikoko ndiko mwoyo wako.
6:22 Mwenje womuviri wako ziso rako. Kana ziso rako yakanaka, muviri wako wose uchazara nechiedza.
6:23 Asi kana ziso rako rave kushatiswa, muviri wako wose richasviba. Zvino kana chiedza chiri mauri riri rima, kukuru sei rima iroro!
6:24 Hapana ungashumira vatenzi vaviri. Nokuti achavenga vane ruvengo munhu, uye vanoda vamwe, kana iye achava kutsungirira pamwe chete, uye akazvidza umwe. Haungashandire Mwari uye upfumi.
6:25 Uye saka ndinoti kwamuri, Musafunganya pamusoro peupenyu hwenyu, kuti uchadya, kana pamusoro pomuviri wenyu, kuti muchapfekei. Ko Upenyu hwunopfuura chikafu, uye muviri kupfuura zvipfeko?
6:26 Funga shiri dzedenga, sei haadzvari, kana kukohwa, kana kuunganidza mumatura, asi Baba venyu vokudenga vanodzipa zvokudya. Uri ukoshi kwete zvikuru kupfuura zvadziri?
6:27 Ndiani kwamuri, nokufunga, anokwanisa kuwedzera kubhiti rimwe chete hwake?
6:28 Uye zvipfeko, munofunganyirei? Fungai midovatova yenyika, sei vanokura; ivo kana basa kana ruka.
6:29 Asi ndinoti kwamuri, kuti kunyange naSoromoni, mukubwinya kwake kwose, akanga kupfekedzwa seimwe yeiyi.
6:30 Saka kana Mwari achipfekedza saizvozvo uswa bwesango, riri pano nhasi, ugokandirwa muchoto mangwana, zvikuru sei achatarisira iwe, O shoma mukutenda?
6:31 saka, usaridza mwoyo, vachiti: 'Tichadyei, uye chii Tichanwei, uye chii Tichafukei?'
6:32 Nokuti vahedheni vanozvitsvaka zvose izvi. Asi Baba venyu vanoziva kuti munoshaiwa izvozvi zvose.
6:33 saka, kutsvaka umambo hwaMwari nokururama kwake, uye zvinhu zvose izvi zvichapiwawo kwamuri.
6:34 saka, musafunganya pamusoro mangwana; nokuti zuva ramangwana achazvifunganyira zvawo. Zvakakwanira zuva zvakaipa kwayo. "